एक अमेरिकी मा 50 राज्यहरु भनिन्छ "एक सानो आइरिस।" र बस किनभने यसको वर्तमान बासिन्दा को बहुमत पुर्खाहरूको यो युरोपेली देशबाट, तर पनि किनभने प्राकृतिक परिदृश्य को समानता को आउँछन्। यो भर्जिनिया। संयुक्त राज्य अमेरिका - सबै पक्षहरूमा मा "मिश्रित" को एक देश। यो पनि जनसंख्या र संस्कृति, र प्राकृतिक परिदृश्य र वास्तुकला को विविधता लागू हुन्छ। भर्जिनिया, तपाईंले शान्त र आरामदायक गाउँमा, सहर, हरियो पहाड र Meadows, आइरिस बन्दोबस्त resembling बीचमा हराएको धेरै देख्न सक्छौं।
भर्जिनिया - ब्लू पहाड र Allegheny हिमालहरूको ridges गर्न अटलांटिक को किनारा फैलिएको जो राज्य। क्षेत्र - 110 785 मी 2। टेनेसी,: यसको घनिष्ठ छिमेकी निम्न अमेरिका को क्षेत्रमा छन् उत्तर कैरोलिना, - राज्य, जस्तै आफु, भर्जिनिया, 10 अमेरिकी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्रहरु, केंटकी (केंटकी) को छ जो डीसी, पश्चिम भर्जिनिया। पूर्व गर्न Delmarva प्रायद्वीप को राज्य हो, तर यो "मुख्य भूमि" भर्जिनिया चेसापिके खाडी अलग छ। सोही, तटीय क्षेत्रमा त्यहाँ swamps मा गरिएका छन् कि ठूलो क्षेत्रमा छन्। पश्चिम राज्य भर Appalachian हिमालहरूको ढलान स्थित, र नीलो Ridge र कम्बरल्याण्ड पठार समावेश छन्। राज्य waterways यस्तो पोटोम्याक, Shenandoah, नयाँ नदी एट अल रूपमा नदी हो। मिश्रित वन ढाकिएको क्षेत्र को सबैभन्दा।
धेरै किलोमिटरसम्म फैलिएको एक राज्य, त्यहाँ पूर्वी मौसम र पश्चिमी भागहरु बीच ठूलो मतभेद हो - यसको climatic अवस्था अनुसार यस क्षेत्रमा किनभने भर्जिनिया, धेरै विविध छ। उदाहरणका लागि, तट आर्द्र जलवायु नजिक Subtropical छ। र यहाँ पश्चिम मा -, कन्टिनेन्टल थप गम्भीर, उच्च वर्षा संग, विशेष गरी जाडो महिनामा। अक्सर सागर हुर्रिकानेस र आँधीबेहरी नजिकै, बज्रपात, बिजुली छन्। लगभग हरेक7वर्ष भर्जिनिया तूफान आक्रमण गर्न subjected।
भर्जिनिया: राजधानी र शहर
रिचमन्ड पश्चिम अटलांटिक राज्य को प्रमुख शहर हो। सबैभन्दा पुरानो Ironworks अमेरिका - राजधानी को सबै भन्दा ठूलो सांस्कृतिक र ऐतिहासिक केन्द्र राज्य कला संग्रहालय, रिचमन्ड ब्यालेट, कैपिटल-Tredegar फलाम कार्यहरू को क्षेत्रमा पहिलो settlers जीवन बारेमा प्रदर्शनी प्रस्तुत जो ऐतिहासिक समाज, छन्। चार भन्दा बढी दर्जन पार्क र उद्यान: शहर धेरै हरियो रिक्त छ। अन्य प्रमुख शहर हो भर्जिनियाबिच, Alegzandriya, नरफल्क, पोर्ट्समाउथ, न्यूपोर्टन्यूज, र यति मा .. तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै तरिकामा रोचक छ।
हामी एउटा सरकारी राज्य उपनाम छ। उदाहरणका लागि, यो "अध्यक्ष को जन्म ठाउ" भनिएको छ। यो पृथ्वीमा, यसलाई यहाँ थियो वाशिंगटन नै, साथै थोमस जेफरसन र अरूलाई सहित 8 अमेरिकी राष्ट्रपति, जन्म। यो घटना को सबैभन्दा नागरिक युद्ध समयमा unfolded कि यहाँ छ, इतिहास को पूर्ण हुन मानिन्छ कि एक राज्य, यो Confederacy राजधानी थियो - "यो tyrants को भाग्य छ!" भर्जिनिया: आधिकारिक राज्य आदर्श वाक्य वाक्यांश छ। र अमेरिका यसलाई यहाँ छ भन्ने विश्वास गर्छन्, पूर्व मा, पहिलो मानिसहरूलाई देखियो।
भर्जिनिया को आधार मा संयुक्त राज्य अमेरिका को उद्भव अघि बस्यो भारतीय कुल: प्रसिद्ध चेरोकी pamunki, chikahomini, आदि 16 औं शताब्दीको अन्तमा, इङ्गल्याण्ड, उत्तर अमेरिका तिर उपनिवेशवाद नीति थाले .. कहिल्यै विवाह गरिएको थियो जो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ म, को सम्मान मा - यो क्षेत्र, भर्जिनिया रूपमा ज्ञात भयो कि ल्याटिन "कुमारी" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ कि त थियो। भर्जिनिया जेम्सटाउन पहिलो राजधानी थियो। पछि, लेट 18 औं शताब्दीमा, राजधानी रिचमन्ड सारियो। सिविल युद्ध पछि, भर्जिनिया (राज्य) संयुक्त राज्य अमेरिका को मुख्य राजनीतिक केन्द्र बनेको छ। शत्रुता को अन्त पछि, उद्योग यहाँ विकास गर्न थाले।
भर्जिनिया को गभर्नर, लेफ्टिनेंट-राज्यपाल र अधिवक्ता जनरल, चार वर्ष को लागि देश को राष्ट्रपति रूपमा निर्वाचित हुनेछन् जो: राज्य को कार्यकारी शक्ति तीन व्यक्ति को हात मा छ। राज्य सर्वोच्च अदालतले को भाग हो जो न्यायाधीशहरूले,4वर्ष को लागि पनि निर्वाचित।
भर्जिनिया सबैभन्दा सुन्दर ठाँउहरु को एक "Shenandoah," राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। अनौठो यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा, तर Arlington राष्ट्रीय चिहान पनि पर्यटकहरु भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ धेरै उल्लेखनीय स्थान छ। । "माउन्टभर्नन" - तिनीहरूले बुश उद्यान र Manor जर्ज वाशिंगटन मा विशेष चासो पनि छन्। प्राकृतिक आकर्षण बीचमा विशेष गरी चेसापिके खाडी मा लोकप्रिय छ। त्यहाँ विभिन्न पुल र सुरुङ देखि गठन एक अद्भुत जटिल छ। तपाईंले तिनीहरूलाई हुन् भने, असली अनुभूति छन्। खैर, भर्जिनियाबिच मा समुद्र तट यो उहाँले रेकर्ड को गिनीज बुक प्रविष्ट किनभने, संसारको सबैभन्दा लामो छ। ठूलो शहर मा, राज्य अविश्वसनीय सुन्दर वास्तुकला एउटा पुरानो तर पुनःस्थापित उपनिवेश-युग निर्माण पाउन सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा ठूलो अमेरिकी ऐतिहासिक शहर, राम्रो तरिकाले एक रिकभरी भइरहेको छ, जो, र Ellwood City, PA - पर्यटकहरु ठूलो चासो जेम्सटाउन, विलियम्सबर्ग छन्।
पहिले नै उल्लेख, भर्जिनिया - संयुक्त राज्य अमेरिका को हरियो बेल्ट छ कि एक राज्य। यसको क्षेत्र को 60 प्रतिशत वन द्वारा कवर छ, तिनीहरूले पहाड मा सुरु र सागर गर्न बिस्तारै धमकना। यो जंगली प्रकृति को Bosom मा हुन प्रेम गर्नेहरूका लागि साँचो स्वर्ग छ। यो मृग, Foxes, squirrels र opossums र Songbirds र raptors घर छ। छोटो मा, धनी इतिहास र अविश्वसनीय प्राकृतिक सौन्दर्य भर्जिनिया विश्वभरिबाट यात्री को लागि एक लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य बनेको छ।
जापान। जापान प्रकृति: विवरण
Kryon बुक: पाठक समीक्षा
Pint - यो ... परिभाषा, इतिहास, मात्रा।
ठूलो निद्रामा चाहनुहुन्छ? त्यसपछि आफ्नो आहार मा समावेश, यी 23 उत्पादन
इमहजुरआमा - यो के हो? कसरी बनाउने र आफ्नो हात संग इमहजुरआमा ड्राइभ जडान?
रेमर होटल रिसोर्ट5* (टर्की / साइड): फोटो, मूल्य र समीक्षाहरू
नीलमणि विवाह को 45 वर्ष कवर